Elton John Los Angeles မြို့မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကပါတီမှာ 70 နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ကျင်းပပါလိမ့်မယ်
ဒါဟာယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲပေမယ့်တနင်္ဂနွေမှာဒဏ္ဍာရီအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အများပြည်သူ Elton John ကသူ့အဋ္ဌဆယ်စုနှစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ မိမိအ 70 ပြည့်မွေးနေ့ကသူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဒါဝိဒ်သည်ပရိဘောဂ, အမြိုးသားတို့နှင့်များစွာသောမိတ်ဆွေကုမ္ပဏီအတွက် Los Angeles မှာဂီတပညာရှင်ကျင်းပခဲ့သည်။
Elton John - ဤကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်လိင်တူချစ်သူ , သူတို့ကိုယ်သူတို့အဟောင်းနှင့်ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်တိုင်းကသူ့မွေးနေ့ကိုအတော်ပင်စဉ်းစားပါကြပါဘူး။ သည်အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်သူသည်၎င်း၏ 70 နှစ်ပြည့်တဲ့ဆူညံအခမ်းအနားလုပ်သောနားလည်သဘောပေါက်ကြဘူးဘာကြောင့်, မသာမျိုးကမှတ်ချက်ပြုရပါမည်ကဲ့သို့သောမြို့ပတ်ရထား၏ရက်စွဲ, အဘို့, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
အကောင်းဆုံးကိုအဝတ်ဝတ်ထား, ဆာ Elton John ၏မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ပါတီကျင်းပပေးသော Los Angeles မြို့ Hammer ပြတိုက်အတွက်စနေနေ့ညတွင် Katy Perry, ခရစ်မာတင်, ရော့ Lowe, ဒါကိုတာဂျွန်ဆင်, Heidi Klum, Stevie Wonder, ရှာရုန်နှင့်ကယ်လီ Osbourne, မဿဲဆီသို့ရောက် လာ. , Morrison ဂျိမ်းစ် Corden, တွမ် Ford ကားသူမ၏ချစ်သူကိုဒါဝိဒ်သည် Burtki နှင့်အခြားနာမည်ကြီးတွေဖြင့်လိုက်ပါသွားသူမ၏ခင်ပွန်းရစ်ချတ် Buckley, နီးလ်ပက်ထရစ် Harris က, အတူ။
ဒါဝိဒ်သည်ပရိဘောဂများနှင့် Elton John
တွမ် Ford ကားနဲ့ Richard Buckley
ကမ္ဘာကြီးကိုဂီတစက်မှုလုပ်ငန်းအပေါငျးတို့သအကြီးမားဆုံးကြယ်ပွကျင်းပခဲ့သည့်ပါတီ, ယောဟန်၏ 70 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့, ဒါပေမယ့်လည်းပညာရှင်များ၏ hits ဖို့စကားများရေးသားခဲ့သည်သူကဗျာဆရာ Bernie Taupin နှင့်အတူ၎င်း၏အသီးအနှံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ 50 နှစ်မြောက်မသာဆက်ကပ်အပ်နှံခဲ့သည်။
Bernie Taupin နှင့်အတူ၎င်း၏ 50 နှစ်တာလက်တွဲကျင်းပ Elton နှင့်
Heidi Klum နှင့်သောမတ်စ် Kaulitz တစ်ရွက်လှေအပေါ်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာလမ်းလျှောက်အပေါ်ပြောက်ခဲ့သည်
မွေးနေ့လူတစ်ဦး၏ဂုဏ်အသရေအတွက်နှင့်လူမှုရေးကွန်ရက်မှာ odes သီဆိုခဲ့တဲ့ပြပွဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ကြင်နာစကားများရှိနေသော်လည်းသူ့ကိုသူ၏ 54 နှစ်အရွယ်ခင်ပွန်းဒါဝိဒ်သည်ပရိဘောဂများနှင့်သူတို့သားကို Zachary ဧလိယ၏စိတ်ရင်းဂုဏ်ပြုလွှာဖြစ်လာရန်အဘို့, Elton ကြောင့်တန်ဖိုးအရှိဆုံးဆိုတဲ့အချက်ကိုဖုံးကွယ်မထားဘူး, အဘယ်သူသည် 2010 ခုနှစ်နှင့် 2013 ခုနှစ်ဟာသူတို့ရဲ့အငှားမိခင်ဘွားမြင်လေ၏။ သူ့ကိုမွေးနေ့ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင်ဖယောင်းတိုင်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကူညီရန်လျှပ်တစ်ပြက်အရွယ်ရောက်ယောက်ျားလေး, ယောဟန် Instagram ကိုအတွက်တင်ခဲ့သည်။
ကြယ်အဖေနှင့်အတူကို Zachary နှင့်ဧလိယက,
အဘယ် Selena ကော? ဟိုတယ်အတွက် groupies နှင့်အတူအဆိုတော် Justin Bieber ပျော်စရာ
ဆိုဖီယာ Vergara နှင့်ဂျိုး Manganiello အယောင်ဆောင်ပြီးလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်ဿုံဇနီးနှင့်ခင်ပွန်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုကစား
Juliette Binoche ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏-chested "ဟုအဆိုပါရှဲလ်အတွက်ဝိညာဉ်တော်" ၏ Premiere မှာ Scarlett Johansson လွှမ်းမိုး
အိုင်ယာလန် Baldwin - Guess ရဲ့အသစ်သောမျက်နှာ
Kylie Jenner ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်ပုံသဏ္ဍာန်သို့သူ့ဟာသူထားဖို့ဘယ်လိုပြသ
မင်းသမီး Emma Stone ရက်စွဲတစ်ခုပေါ်တွင်ဘုံကလူကိုဖိတ်ကြားထားသူနာမည်ကြီးတွေရဲ့ရာထူးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး
Wendy Deng 21 နှစ်အရွယ်အထီးမော်ဒယ် Berthold Zahoranom နှင့်အတူအချစ်ဇာတ်လမ်းလိမ်
Ramson - အမျိုးအနွယ်ကိုအနေဖြင့်ကြီးထွားလာ
ကော့တေးအစားအသောက်များတွင် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ - ရောဂါ
အန္န Sedokova အန်တိုနီယိုဘန်ဒေသစ်မူဆယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်
သားအိမ် fibroids - သွေးဆုံးနေစဉ်အတွင်းလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာ
သငျသညျပိုက်ဆံကယ်တင်ကူညီဖို့ 33 အကြံပေးချက်များ